နေခရမ်း: တရုတ်နိုင်ငံမှ စိတ်ရောဂါဆရာဝန်တစ်ဦး၏ကြေငြာဆန်း
ဒေါက်တာဟေး အမည်ရှိတရုတ်နိုင်ငံမှ စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်တစ်ယောက်ဟာ ရှန်ကျင်းဇ် မြို့ တော်မှလမ်း
ပေါ်တွင် အတွင်းခံဝတ်စုံသာဝတ်ဆင်ထားသည့်အမျိူးသမီးငယ်တစ်ဦးနှင့် အတူ ၎င်း၏ဆေးခန်းအတွက်
ကြေငြာထွက်ခဲ့ သဖြင့် အင်တာနက်သုံးစွဲသူ တရုတ်နိုင်ငံသားများ ( အင်တာနက်မှ ထိုဓါတ်ပုံများမြင်တွေ့ 
ခဲ့ ကြရ၍ ) အံ့ အားသင့် ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်သွားခဲ့ ကြရပါတယ်...
ဒါဟာ လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်သမားရိုးကျလုပ်ငန်းကြေငြာတစ်ခုမဟုတ်တာတော့ သေချာပါတယ်...
ဒီလိုအဆန်းထွင်ကြေငြာတဲ့ သူကလည်း စိတ်ပညာရှင်၊ စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်နေတာမို့ သူ့ အနေ
နဲ့ လူတွေရဲ့ မှတ်သိတုံ့ ပြန်မှုကို တတ်သိနားလည်နေတာဖြစ်ပါတယ်...
ဒါကြောင့် လည်း( အခုလိုအေးချမ်းတဲ့ ကာလမှာ အတွင်းခံအ၀တ်အစားသာဝတ်ဆင်ထားသည့် အမျိူးသမီး
ငယ်တစ်ဦးနှင့် အတူလမ်းပေါ်မှာ ထွက်လာပြီး ကြေငြာလို့ ) လူတွေအထိတ်တလန့် ၊ တစ်အံ့ တစ်သြဖြစ်
စေမယ့် ဖန်တီးချက်ကို စီစဉ်ခဲ့ တာဖြစ်မှာပါ...
သူက ဘရာစီယာနှင့် ပင်တီဘောင်းဘီသာဝတ်ဆင်ထားသည့် အမျိူးသမီးငယ်ကို " နိုင်ငံတော်ရဲ့ အဖိုးတန်
သားကောင်းရတနာ၊ စိတ်ရောဂါအထူးကုဆရာဝန်၊ တစ်နှစ်လျှင်ဝင်ငွေ ယွမ်ဆယ်သန်း၊ ဆေးခန်းရောင်း
မည်" ဟူသောဆိုင်းဘုတ်ကို ကိုင်မြှောက်စေခဲ့ ပါတယ်...
ထိုအမျိူးသမီးငယ်က မတ်တပ်ရပ်ပြီးဆိုင်းဘုတ်ကိုကိုင်မြှောက်နေချိန်မှာတော့ စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်ကြီးက ကုလားထိုင်တစ်လုံးပေါ်မှာသက်တောင့်သက်သာထိုင်ပြီး လမ်းသွားလမ်းလာများ စုရုံးရောက်ရှိကာ မိုဘိုင်းဖုံးများဖြင့် ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးသည်ကို ခံယူရင်းသတင်းမီဒီယာများအားစောင့် ဆိုင်းနေခဲ့ ပါတယ်...
ယခုကဲ့ သို့ လူအများအံ့ အားသင့် စေမည့် နည်းလမ်းကိုသုံးသည့် သူ့ ရဲ့ နည်းလမ်းဟာ ထိရောက်တယ်လို့ 
ဆိုရပေမယ့် ဖော်ချွတ်ကာ ဆိုင်းဘုတ်ကိုင်မတ်တပ်ရပြရသည့် မိန်းကလေးကတော့ ပျော်ရွှင်နိုင်မှာမဟုတ်
ထိုကဲ့ သို့ အရှက်လုံရုံမျှဝတ်ဆင်ပြီးကြေငြာပြဖို့ သူမအနေနှင့် ငွေကြေးတစ်စုံတစ်ရာရရှိမှာမှန်ပေမယ့် အေး
ချမ်းလှတဲ့ ဆောင်းနေ့ တစ်နေ့ မှာထိုသို့ ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ ကတော့ မလွယ်လှပါဘူး...
လမ်းသွားလမ်းလာမြင်တွေ့ သူများရဲ့ ပြောကြားချက်အရ မိနစ် ၂၀ လောက်အတွင်းမှာပဲအေးလွန်းလို့ သူမ
ရဲ့ အသားအရေတွေနီလားပြီး အ၀တ်အစားတွေပြန်ဝတ်ခဲ့ လိုက်ပါတယ်...
ဒါပေမယ့် ထိုအချိန်ကာလကတော့ ဆရာဝန်ကြီးမျှော်မှန်းတာထက် ( သူ့ ဆေးခန်းကို ) လူသိပိုများသွားစေ
ထိုဆရာကြီးရဲ့ ကြေငြာပုံကိုရှုစားလှည့် ပါကုန်....
လက်သည်းခြေသည်းညှပ်တယ်၊ နားဖာကလော်တယ်....အဲလေ မဟုတ်ပါဘူး...
ကြိုက်သလောက်ရူးပါစေ ...ကျွန်တော်နဲ့ တွေ့ ယင် ပိုရူးစေရမည်...
တစ်နှစ်ကို ယွမ်ငွေဆယ်သန်းဝင်တာမို့ လမ်းပေါ်မှာ ကုလားထိုင်တစ်လုံးနဲ့ ဆေးခန်းဖွင့် တာပါ...
ဒီမှာချမ်းလို့ သေတော့မယ့် ... သူ့ ကျတော့ ကုတ်နဲ့ ဘာနဲ့ အကျအနထိုင်လို့ 
A certain psychologist who goes by the name of Doctor He has shocked Chinese netizens after he showed up on the streets of Shenzen City, China, withawoman in her underwear, who helped him advertise his services.
I know it’s not the most common way to look for employers, but you have to understand this guy isapsychologist; he knows how the human brain works so I guess he decidedashocking approach was the easiest way to grab the attention he needed. So He hiredagirl to stand beside him on the street, dressed only in underwear and holdingasign that said ““National treasure, Mental Illness Specialist, 10 million yearly salary, searching for buyer.” Meanwhile he just sat quietly in his chair, waiting for the media and watching as passers-by gathered to take photos with their cellphones.
Very straightforward marketing strategy I must say, but I bet the girl hated every minute of her performance. While she may be comfortable getting paid for showing up in her underwear, doing so onawinter day must not have been easy. Asamatter of fact, witnesses say her skin quickly turned red from the cold, and she put her clothes back on after about 20 minutes. But that was more than enough for the doctor to reach his goal.
ရေးသားသူ... နေခရမ်း at 10:09 AM
အကြောင်းအရာ ထူးဆန်းလူများ, ထူးဆန်းအကြောင်းအရာများ